WAA MAXAY NENASIL FAA'IIDO LEH: SHARAXAADDA IYO ISTICMAALKA ALAABTA CEERIIN EE CAANAHA - DAAWADA DADWEYNAHA
Waa maxay calaamadaha faa'iido leh, sida loo diyaariyo daaweynta xanuunka?
Xasir dhir dhaadheer oo dhaadheer ah waa daaweyn dadweyne oo caan ah oo ka dhan ah cudurrada - sharaxaad ka mid ah hantidooda faa'iido iyo contraindications, iyo sidoo kale sawir ka dib ee maqaalka.
Warshad badani waxay ku koraysaa 1.5-2 meter. Geedka gaaban, fareeshka, oo xididdada yar yar. Caleemaha ayaa la fiiqay, calaamadee. Miiskana cufan yahay oo toosan, wuxuu ku dhammaadaa ubax waaweyn ama jaale ah.
Ubaxku wuxuu dhacaa bilaha Luuliyo ilaa Sebtembar, miraha waxay u muuqdaan bilaha Agoosto iyo Sebtembar.
Ma taqaanaa? Necvile waxaa loo yaqaanaa tan iyo asalkiisaba: waxaa lagu daboolay halyeeyada iyo qadarin. Magaca qadiimka ah "Inula" waxaa ku dhacay magaca gabadhii Zeus. Halyay kale ayaa sheega in cawskaasi uu leeyahay sagaal awood - wuxuu ka saarayaa waxyeellada, indhaha sharka, wuxuu ka caawiyaa jacaylka jacaylka iyo waxyaabo kaloo badan.
Magacyada kale ee geedka: gabbaldayaha duurjoogta ah, bikradda, oman.
Marka aynu ka hadlayno wax ceeb ah, waxaan ka hadlaynaa xididka, laakiin geedo kale ayaa sidoo kale leh sifooyinkiisa bogsiinaya. Tani waxay sabab u tahay hannaanka gaarka ah ee geedka.
Waxyaabaha Diiwaan-gelinta ah
Halabuurka rhizomes waxaa ka mid ah:
Inulin iyo inulenin - polysaccharides, ilaha dabiiciga ah ee tamarta. Waxay xoojinayaan unugyada unugyada unugyada jidhka.
Resins (xanjo) - wuxuu leeyahay bakteeriyada iyo calool-xanuunka.
Mucus - iyada oo u mahad naqaysa, dhirta ayaa leh waxyaabo ka soo horjeeda antifaasikada.
Alkaloids - suuxinta dabiiciga ah, antispasmodic. Waxa kale oo leh hanti ammaan ah.
Faytamiin E (tocopherol) - faa'iido leh maqaarka iyo dhiigga.
Saliid muhiim ah - waxay bixisaa qalabka xanuun joojiyaha ah, daawooyinka dabiiciga ah, antiseptic ee elecampane.
Inulin waxaa lagu muujiyaa dadka sonkorowga sida walaxda caadiga ah ee sonkorta dhiigga ku jirta, iyo inulin waxaa sidoo kale laga helaa nuucyada, scoroner, nivyanik, osote, iyo girasol.
Waxa kale oo ku jira halabuurka waa saponins, macdan (magnesium, manganese, potassium, calcium), birta, fitamiin C
Xiddiga rootida faa'iido leh
Qeyb ka mid ah tayada noocaas ah waxay sharraxaysaa anti-bararka, expectorant, guryaha choleretic ee geedka. Elecampel waa sifeyn wanaagsan, duriinka iyo tayada diaphoretic. Waxaa loo isticmaalaa in laga saaro gooryaanka. Intaa waxaa dheer, waxaa wanaagsan inaad u isticmaasho Oman qaybta hoose, si aad u hagaajiso dheefshiidka.
Isticmaalka dhirta daawada dabiiciga ah
Noocyada kala duwan ee tayada waxtarka leh ma heli karaan agagaarka dhirta dadka. Waxaa jira liis cajiib ah oo dhibaatooyin ah oo loo adeegsan karo xididka devyasila: maxay ka caawineysaa? Waxyaabaha ugu muhiimsan ee daawada dhaqameed ayaa lagu falanqeyn doonaa hoos.
Recipe for decoction waa fududahay: 1 qaadada rhizomes la jajabiyey iyo xididdada waxaa ka buuxsamay 1 koob oo biyo ah, ka dibna isku dar ah waa la kariyey 10-15 daqiiqo. Ka dib markaa, dhammaantood waxay u baxaan inay u dillaacaan 3-4 saacadood. Waa lagama maarmaan in la xareeyo. Qaado decoction of 1 qaado oo 3-4 jeer maalintii.
Waxaa loo adeegsadaa sidii wakiil ah iyo wakiil gaas. Waxay ka caawisaa jirrada iyo cudurrada mindhicirka. Dib-u-cunista joojinta waxay ka caawisaa barar afka iyo afka. Sidoo kale waa antiseptic wanaagsan oo lagu dhaqo boogaha.
Guryaha Antiseptic waxay leeyihiin - zhizuchka gurguur, momordika, beerta daaqada, physalis, sarratseniya, pear.
Wixii diyaarinta faleebo Waa lagama maarmaan in la qaato 120 g of rhizomes leh xididdada, kuwaas oo ku shub 0.5 0.5 cas oo dufan leh, diyaarso 10 daqiiqo, ka dibna xayeysiin. Qaado faleebo waa in ay ahaato 50 g ka hor inta aan la cunin 2-3 jeer maalintii.
Tilmaamaha faleebo, waxay leedahay saameyn tonic ah, waxay ka caawisaa cudurrada caloosha (gastritis iyo boogaha). Tincture dhaqameed ee vodka: 30-40 garaam oo xididdada iyo rhizomes ee Oman si fiican u jar, kadibna ku dar nus litir oo vodka. Ku adkeyso dhammaanba laba maalmood gudahood mugdi madow, walaaqaya walxaha wakhtiga ah. Ka dib markii wakiilka la sifeeyay, waxaa la cuni karaa 25 dhibcood cuntada ka hor. Tincture Tani waxay faa'iido u tahay sonkorowga, dhibic, cagaarshow.
Ma taqaanaa? Inulin, taas oo hodan ku ah dhirta, awood u leh inay hoos u dhigto heerarka sonkorta dhiigga.
Wixii daaweynta cudurrada maqaarka kala duwan - dermatosis, cambaareyn, finan yaryar oo dabiici ah - u isticmaal boomaatada ku saleysan elecampane.
Hal siyaabood oo loo diyaariyo cadaradan:
Isku qaso budada Oman xididada iyo daaqsiyada ee saamiga 1: 2;
si fiican isku qasaan iyo walaaq;
Baalalku wuxuu diyaar u yahay isticmaalka, waxaana loo isticmaali karaa meel xanuun ah.
Sida loo diyaariyo xididdada Devyasila
Qaybaha soo go'ay ee dhirta la soo saaray dayrta.
Waa muhiim! Dhirta yaryar ee uruurintu maaha kuwo ku haboon - dooran cawska kaliya ee ka weyn 2 sano.
Qeybta dhulka ee geedka ayaa la saaraa, iyo xididada ayaa la qoday. Qeybaha hoose waxaa la dhaqaa, la nadiifiyaa oo la qalajiyaa. Marka xigta, xididdada ayaa la gooyaa dhererka qiyaastii 20 mm ama ka yar waxayna bilaabaan inay qalalaan. Qallajinta waxay dhacdaa heerkul ah 40 ° C. Diyaargarowga xididada loo isticmaalo waxaa lagu ogaan karaa isha - adigoo juqraafi ah. Muuqaalka muuqaalka qallalan ee habboon ee la qalajiyey wuxuu noqon doonaa mid miraayad ah oo dibedda ah, iyo caddaan gudaha ah, iskudhafyo leh shucaac saliideed leh. Xididkani wuxuu ku haboon yahay isticmaalka 3 sano.
Goynta waxaa sidoo kale la samayn karaa guga, habka isma bedelin.
Root elecampane, marka lagu daro guryaha daawada, waxay leedahay saameynaha iyo waxyeelada.
Waa muhiim! Elecampane waa warshad sun ah. Ha ka badin maaddooyinka caadiga ah ee liiska ku jira. Ha sameynin shuruudaha xoogga leh - waxa kaliya oo dhib ah, oo ma kicin karo daaweynta. Calaamadaha xad dhaafka ah waa daciif, lallabbo, iyo dhadhan xad dhaaf ah.
Inkasta oo Oman loo isticmaali karo gynecology, xilliga uurka, alaabooyinka ku salaysan geedkan ayaa khatar noqon kara - waxaa jira khatarta ilmo soo rididda. Si taxaddar leh u isticmaal geedka caloosha iyo kalyaha. Sagaal ayaa ka hortagaya haddii ay dhacdo kororka dhiigga ee kor u kaca, cudurrada mindhicirka caloosha.
Hargabyo, xanuun, calool xanuun ayaa dhammaantood dhib ku ah dadka oo dhan. Waa xaalado noocaas ah oo aad guriga ku haysatid daroogo leh qashin iyo caafimaad.